Madaxweyne Farmaajo iyo dhiggiisa dalka Masar oo khadka Telleefoonka ku wada hadlay. – Hornafrik Media Network
Hornafrik-Madaxweynaha dowladda Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo xalay khadka tellefoonka kula hadlay dhiggiisa dalka Masar Cabdulfataax Al Sisi ayaa uga mahad-celiyay taageerada joogtada ah ee ay dowladda Masar la garab taagantahay shacabka Soomaaliyeed.
Madaxwynaha ayaa sheegay in Soomaaliya adkeyn doonto xiriirka soo jireenka ah ee ka dhaxeeya labada dal ee walaalaha ah.
Madaxweyne Sisi ayaa dhankiisa sheegay in Masar ay diyaar u tahay in ay gacan ku siiso Soomaaliya dadaallada ay ku xasilinayso dalka, isaga oo uga mahadceliyay Madaxweyne Farmaajo guulaha la taaban karo ee ay dowladda Federaalku ku tallaabsatay bilihii lasoo dhaafay.
Waxaa ay sidoo kale, isla soo hadal qaadeen in si wadjir ah loo wajaho xaaladaha haatan ka taagan dalka iyo guud ahaan gobolka.